တရုတ်သို့ရောက်ရှိခြင်း - လူမီနီယမ်သည်အလင်းရောင်အောက်ဘက်ရှိအလင်းရောင်အကျယ်ဆုံးထောင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသူ | Pro ။ အလင်းရောင်
ဆွဲပြားအလင်း & မြင့်မားသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်
ရောက်ရှိမှုအသစ် - အလူမီနီယမ်သည်အလင်းရောင်ကိုကျယ်ပြန့်သောရောင်ခြည်ထောင့်ဖြင့် ဦး ဆောင်သည်
RO.LIGHTING CO ။ , LTD ။ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုအမြဲတမ်းအလေးထားသည်။ LED လူမီနီယံမီးအလင်း, recessed အလင်း, စီးပွားဖြစ်အလင်းရောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီကတီထွင်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်မှရောင်းချသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအရည်အသွေးကောင်းသည့်ကုန်ကြမ်းများဖြင့် အသုံးပြု၍ ဦး ဆောင်သောအလူမီနီယမ်အလင်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအသုံးပြုသူများအတွက်လုံးဝလုံခြုံသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်း၊ ကျယ်ပြန့်သောရောင်ခြည်ထောင့်၊ လူကြိုက်များပြီးလက်တွေ့ကျသောအရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်မှုလွယ်ကူခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုအသုံးပြုသည်။
၎င်း၏ကျယ်ပြန့် applications များအကြောင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အသစ် - ဦး ဆောင်သောအလူမီနီယမ်အလင်း ပညာရှင်များသည်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၄ င်း၏လက်တွေ့ကျမှုကိုနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင်သက်သေပြခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းကိုအဆင့်မြင့်ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ရုံးခန်း၊ နေအိမ်နှင့်အခြားနေရာများတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ လူကြိုက်များမှုဆက်လက်တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏လျှို့ဝှက်တန်ဖိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုတို့ကို မှီခိုအား ထား၍ Pro.Lighting သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်အောင်ပို့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တုံ့ပြန်မှုရှိရှိကြိုတင်ရောင်းချမှုနှင့် ၀ ယ်ယူပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ချီးမွမ်းမှုကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်ဆန္ဒရှိသော၊
post အချိန်: ဇူလိုင် -14-2020
Shangan Guojia စက်မှုဒေသကြီး, Jinsha Danzhao မြို့, Nanhai Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်။
ရောက်ရှိမှုအသစ် - အလူမီနီယမ်သည် w ...
အချိန်ဆန့်ကျင်ပြိုင်ကား! Pro.Lighting တွင် res ...
Led Spot, Cob Spot Light, ခေတ်သစ်ဆွဲပြားအလင်း , Spot Lighting, အစက်အပြောက်အလင်း, Spotlight ,